Kilil 5: Ogaden Juuq Ninkii Dhaha Jeel ha Galo, Beelaha Kale Jees Jees! – Rasaasa News
Kilil 5: Ogaden Juuq Ninkii Dhaha Jeel ha Galo, Beelaha Kale Jees Jees!
Mar 29, 2011 "Madaxweynaha DDSI, Beelaha Kale Jees Jees!, isaga oo jooga magaalada Dire dawa. Tolow hadalkaas hadii uu odhan lahaa 90 jir Ogadeen oo [More...] jooga Degaanka Somalida Itobiya, Kilil 5: Ogaden Juuq Ninkii Dhaha Jeel ha Galo, ma aha madaxweyne ee waa madaxweyne ku sheeg." hadalkaas waxaa ideecada BBC-da ka yidhi caaqil Ciise ah, maxaa ku dhici lahaa?
“Madaxweynaha DDSI, ma aha madaxweyne ee waa madaxweyne ku sheeg.” hadalkaas waxaa ideecada BBC-da ka yidhi caaqil Ciise ah, isaga oo jooga magaalada Dire dawa. Tolow hadalkaas hadii uu odhan lahaa 90 jir Ogadeen oo jooga Degaanka Somalida Itobiya, maxaa ku dhici lahaa?
Xornimada ugu weyn iyo dimoqraatiyada uu ruuxa binaadamka ah u baahan yahay waa in aan lagu celin laguna ciqaabin afkaartiisa.
Labada dal ee Itobiya iyo Kenya waa laba dal oo ay degan yihiin dad Somaliyeed, Kenya looma haysto in ay tahay dal Somalida wax kaga maqan yihiin, laakiin Itobiya waxaa loo yaqaan gumaysi. Wax u dhaxeeyaa waa xoriyada afkaarta iyo dimoqraatiyada oo kaliya.
Beesha Ogadeen oo ah beesha ugu badan beelaha Somalida ee degan labada dal ee Kenya iyo Itobiya. Kenya waxay ku haysataa qadarin, Itobiyana waa lagu ciqaabaa, waana arinta keenta in beesha Ogaden ay dagaal la gasho Itobiya.
Itobiya waxaa qadarin ku haysta beelaha ku yar degaanka Somalida, kuwaas oo u hadala si xor ah iyaga oo aan cabsi ka qabin in wax la yeelo, waxayna degmooyinkooda u doortaan ruuxa aqoonta leh ee wax u soo kordhin kara.
Arintaas waxaa daliil u ah in si aan gabasho lahayn ay odayaashoodu uga hadlaan Ideecadaha caalamiga ah iyaga oo aan ahayn dabaddood ka cabsadayaal. Odayaal ka mid ah beesha ciise ayaa yidhi “madaxweynaha degaanku madaxweyne ma ah ee waa madaxweyne ku sheeg” aflagaado ayna lahayna u gaystay beesha Ogadeen ee ku hoos qatan Itobiya.
Beesha Sheekhaash, oo aad u tiro yar waxay iska soo uruursatay meel walba oo ay degantahay ummada ku hadasha afka Somaligu, oo ayna ku lahayn hal degmo. Waxayna beeshaasi kor degtay Jilib Ogadeen ah, Itobiyana gacan bay ku siisay in ay qaadato dhul ayna lahayn. Sheekhaash waxay ka buntufanaysaa sidee baa rubac loo siin kara Jilibka Ogadeen ee ay degmadiisa boobeen ‘ma Israel baa’.
Labadan beelood iyo kuwa kale waxay ka naxeen in Ogaden nabad qaatay, waxayna u hanjabayaan dadka ay Itobiya masuulka ka dhigatay iyo dawlada Itobiyaba.
Mar aan fogayn ayey ahayd kolkii Dr. Axmed Sheekh, oo ka mid ahaa masuuliyiinta ugu macquulsan maamulka DDSI, ahna nin aqoon dheer leh shaqadiisii laggaga caydhiyey hadal. Shaqada uu baneeyey Dr Axmed waxaa dhab ah in baahideedu degaanka ka jirto. Waxaa la sheegay in uu madaxweynaha degaanku shaqada ka caydhiyey, arintaas qoraagu ma rumaysna.
Waxaa hadaba isweydiin leh wax Ogadeena cadaadisku u saaran yahay ee kii juuq yidhaa shaqada looga joojin ama jeel loo galin, beelaha kalena uusan u jirin wax cadaadis ah oo saaran, si xor ahna ay ugu hadli karaan.
Beesha Ogaden nabad bay qaadatay ONLF-na soo xaraysay, waxaana muhiim ah in Itobiya ay garwaaqasto arintaas oo ayna dhicin in ruuxna loogu caga jugleeyo nabadiid baad lug ku leedahay, sida hada Axmed Sheekh ku dhacday.
Janankii Jwxo shiilay, oo Jubba Jaakad u Qaatay!
Madaxweynaha Degaanka Somalida oo Booqasho ku Jooga Gabalka Shabeele